Vhidhiyo: Colts.com inoita Vhidhiyo Kushambadzira kweVatsigiri Nzira Yakakodzera! | Martech Zone
Pat akatumira vhidhiyo nhasi yemhuri yekwaColt yemasaiti ayo andaifunga kuti aishamisa - kuendesa iko kusvika kwe Colts.com, myIndianaFootball.com uye MyColts.net. Ivo chaizvo vakagadzira yakanaka vhidhiyo mutambi iyo inowedzera yakanaka ficha ... yakadzokororwa kushambadzira. Nguva imwe neimwe munhu paanoisa izvi mune yavo saiti, mushambadzi wavo anosvika kune vateereri vatsva. Zvakanyatsoitwa.
Pat anobvunzawo mubvunzo wakakosha ... nevashanyi vanosvika mamirioni 7.5 kuColts.com pagore, asi 280,000 vashanyi kunhandare - iboka ripi rinonyanya kukosha? Kana iri pamari, ndine chivimbo chekuti 7.5 mamirioni evashanyi vari kutenga zvinhu zvine chekuita neColts vangangodarika kutengesa tikiti nechikwata. Nekudaro, iwe unogona zvirokwazvo kupokana kuti mabutts ari muzvigaro ndiwo ruzha pamutambo uye, vakagara vari vanhu vanofunga zvakakwana zvechikwata kuti vashandise yakanaka chunk yeshanduko pamutambo wega wega.
Ini ndichafanirwa kuenda nevatengi-vanotenga matikiti, Pat! Ini ndinofunga vazhinji veavo vanhu vanogara kwenguva refu, kuburikidza nemwaka wakanaka uye wakashata mwaka. Ini handimbofa ndakadzikisira pesvedzero iwe yauri kuva nayo mukukura iro boka revanhu KUBVA kuvashanyi mamirioni 7.5 kunyange. Iyo inofadza, inobatsira mari muhukama hwenguva refu nevateveri vako.
Tags: kuongorora kwepfungwapfungwa yekuyedzapfungwa yekuyedza kuongororainbound Marketinginbound kushambadzira ecosysteminbound kushambadzira infographicinbound kushambadzira zanotsvakurudzowordpress muwordpress multidomain
Anofara Zuva reVeterans
Yemagariro Network yeUS Navy MaVeterans!
Nov 13, 2007 pa8: 47AM
Huya, Doug… funga kunze kwebhu! (er, nhandare) 🙂
Nov 13, 2007 pa9: 01AM
Hei! Ini ndati iyo 7.5 mamirioni yaive yakanaka uye inobatsira mari!